“Man City waxa ay u tartamaysaa sida Xawayaannadii oo kale” – Fernandinho – Gool FM
“Man City waxa ay u tartamaysaa sida Xawayaannadii oo kale” – Fernandinho
(England) 26 Abriil 2019. Ciyaaryahanka Khadka dhexe iyo kooxda Manchester City ee Fernandinho ayaa sheegay in kooxdiisa Skay Blues ay muujineyso in xili ciyaareedkan ay u tartami karto sida ” Xawayaannadii oo kale ” si ay u difaacdaan koobka horyaalka Premier League.
Man City ayaa dib ugu soo laabatay hogaaminta horyaalka Premier League kddib markii ay 2-0 kaga soo adkaadeen kooxda Manchester United kulankii Arbacada, waxayna hal dhibic ka sareeyaan Liverpool.
Skay Blues ayaa suuragal noqon karta inay noqoto kooxdii ugu horeysay ee difaacata koobka horyaalka Premier League laba xili ciyaareed isku xigta, tan iyo kooxda Manchester United oo sidaas sameysay 2009.
City ayaa qarka u saaran inay xaqiijiso hanashada horyaalkeedii 4-aad, 8-dii xilli ciyaareed ee u danbeysay, blse waa haddii ay badiyaan 3-da kulan u harsan.
Hadaba xidira reer Brazil ee Fernandinho ayaa sheegay in kooxdiisa ay ku muujiisay kulankii ay la ciyaareen Manchester United sida ay u doonayaan ku guuleysiga horyaalka.
“Waxaan soo bandhignay rabitaankeena ku aadan sida ay inooga go’antahay inaan ugu dagaalano kubad kasta sida Xawayaannadii oo kale, waxaan u maleynayaa inay tani tahay ruuxda koox doonaysa inuu ku guuleysto horyaalka”.
“Haddii aan eegno bishii Janaayo, Liverpool ayaa hogaanka ku qaban kartay 10 dhibcood, balse anaga ma dooneynin inay sidaas dhacdo, kaddib kulankii aan wada ciyaarnay waxaan ku soo yareenay farqiga inoo dhexeeyay ilaa iyo 4 dhibcood oo kaliya, hadana waxaan ka sareynaa 1 dhibic”
“Tani waa wadada loogu guuleysan karo Premier League, waxaan rajeynayaa inaan qabsan doonno shaqadeena, si aan u guuleysano 3-da kulan ee inoo harsan isla markaana aan ugu guuleysano horyaalka”.
Muxuu ka yiri Zinedine Zidane bar-barihii ay xalay la galeen kooxda Getafe???